Sida loo arko dukumiintiyada ugu dambeeyay Windows 10 iyo Start menu | War gadget
Raadinta qaybta ah Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee Windows 10? HIlaa dhowaan waligay maan dareemin in shayga "Dukumiintiyadii ugu dambeeyay" uusan ka muuqan liiskayga Bilowga, xaqiiqda ayaa ah in saaxiibkay uu i weydiiyay sida aan ku arki karo dukumiintiyada dhawaan la furay waana markii aan seegay sheygan.
Sidii aan ugu arkay sheygan liiska bilowga ah ee saaxiib kale, waxaan u maleeyay inay noqonayso xulasho habayn ah oo aan naafo ku noqon lahaa. Marka fiiri deg deg ah kadib waxaan helay ikhtiyaarka ladiiday oo hada waxaan kuu sheegayaa sidaad udhaqaajin karto si sheyga "Dukumiintiga ugu dambeeyay" uu uga muuqdo liiskaaga Bilowga.
1 Faylasha ugu dambeeyay ee Windows 10
2 Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee Windows XP
Faylasha ugu dambeeyay ee Windows 10
Si aad u awoodo inaad ku aragto faylasha ama dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee Windows 10, waa ku filan tahay inaad kiciso shaqada noo ogolaaneysa inaan fulino. Waana in Microsoft aysan dooneynin inay iloobaan qaabkan cusub ee nidaamka hawlgalka caanka ah ee xiisaha leh iyo wixii ka sareeya dhammaan xulashada waxtarka leh.
First of dhan fur Windows 10 goobaha menu, kaas oo aad ka heli karto Start Menu ama adigoo adeegsanaya Windows + i key key. Markaad halkaas tagto, tag qaybta "Shakhsiyeynta".
Haddaba xulo "Bilow" oo dhaqaajiso ikhtiyaarka "Muuji waxyaabaha dhawaan la furay". Haddii aadan dhaqaajin, ma awoodi doontid inaad aragto feylasha iyo dukumiintiyada ugu dambeeyay ee aad ka furtay Windows 10.
Haddii aan soo bandhigno Start Menu oo aan dooranno codsi gaar ah, kiiskeenna Microsoft Excel, adigoo riixaya badhanka midig ee jiirka waxaan awood u yeelan doonnaa inaan aragno faylasha dhowaan la furay.
Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee Windows XP
Dhagsii liiska bilowga ka dibna ku dhaji batoonka midig ee midig guji aag bilaash ah oo baarka buluugga ah ee ku yaal xagga hoose ee menu-ka. Waxaad heli doontaa daaqad yar oo oraneysa "Guryaha". Fiiri sawirka:
Sida aad ku arki karto sawirkii hore, sheyga "Dukumiintiyadii ugu dambeeyay" kama muuqdo liiska.
Dul tilmaamaha daaqada oraneysa "Guryaha" oo hal mar guji. Daaqadda soo socota ayaa soo muuqan doonta:
Dhagsii badhanka "Customize" iyo daaqada furmay, dooro tabka "Advanced options".
Hadda waa inaad calaamadeysaa sanduuqa "Muuji dukumiintiyada dhowaan la furay" ka dibna riix "OK", daaqadda ayaa xiri doonta. Maadaama daaqada "Taskbar iyo Start Menu Properties" wali furan tahay, guji "Apply" ka dibna "OK" si aad u xirto.
Hadda waxaad ka arki kartaa dukumiintiyadaadii ugu dambeeyay menu-ka Start:
PUgu dambeyntiina, xusuusnow in haddii sababo jira awgood aadan rabin qof inuu arko dukumiintiyada aad dhawaan furtay, waad tirtiri kartaa liiska. Si tan loo sameeyo, ku celi tillaabooyinka 1 illaa 3 iyo hal mar oo ah "xulashooyinka horumarsan" ee ku yaal daaqadda "Customize the Start menu" daaqada, kaliya waa inaad gujisaa badhanka "Delete list".
RXusuusnow in tani aysan tirtiri doonin dukumiintiyada aad dhawaan isticmaashay, waxay ka tirtiri doontaa oo keliya liiska "Dukumiintiyada Dhawaan" markii aad mar kale isticmaashona waxay ka muuqan doonaan liiskan markale.
EWaxaan rajeynayaa inaad ka heshay casharkaan mid waxtar leh si aad u aragto Windows 10 Faylasha Dhawaan iyo XP. Salaamaha beerta canabka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Software » Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee Windows 10
65 faallooyin, ka tag taada
Hello Alejandro, maalmo yar gudahood waxaan isku dayi doonaa inaan xalliyo shakigaaga ku saabsan ujeedka, waxaan arki doonaa sida loo duubay iyo sida caadiga ah loogu maqlo codka.
Waad ku mahadsantahay faallooyinka, waa la qiimeeyay. Salaan.
Waad salaaman tahay khal, maanta waxaan helay boggaaga oo ka dhex baaraya internetka waxayna iila muuqatay mid aad iigu xiiso badan uguyaraan wixii yar ee aan arkay, waxaan u maleynayaa in dhamaan talooyinkaaga ay waxbadan iiga faa'iideysan doonaan, waxaan horey uqaaday tillaabooyinka si aan u helo curiye dukumiintiyadii ugu dambeeyay oo aniga ila muuqda waxtar badan, sidoo kale waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan ku helay maxaa yeelay waxaan raadinayay macluumaad ku saabsan sida loo maareeyo ciyaaryahanka Iamp classic waxaan horey u arkay waxaad sharaxaad ka bixinayso rakibida waana wax aad u wanaagsan , waxa aan jeclaan lahaa inaad i caawiso ayaa ah inay i baraan sida loo maareeyo ikhtiyaarka duubista cd iyo in muggu isku mid yahay dhamaan heesaha tan iyo intii aan ka soo ururiyey meelo kala duwan oo aan leeyahay mugag kala duwan, marka laga hadlayo maqalkooda ciyaartoygan wax dhibaato ah majiraan maadaama sidaad sheegto mugga si otomaatig ah loola siman yahay inuu ciyaaro laakiin cashuurbixin sidee baan sameeyaa Waan ku qanacsanahay taageeradaada, goor dhow ayaan is arki doonaa
Waad ku mahadsan tahay khiyaanada aanan ogeyn inaad arki karto dukumiintiyadeyda ugu dambeeyay. Hayso haddii aad sii waddo inaad si fiican u sharaxdo Windows tricks. Salaan ka timid Caracas.
Waayahay Maroon, waan ku faraxsanahay in xeeladdu ay waxtar kuu lahayd. Waan sii wadi doonaa inaan dhejiyo xeelado dheeri ah, maxaa yeelay inkasta oo mararka qaar ay umuuqdaan kuwo fudud, haddana qof walba ma garanayo iyaga oo hadda adiga, tusaale ahaan, waxaad horeyba u ogayd waxa la sameeyo si loo muujiyo dukumiintiyada dhowaan, sax? Ku xisaabso Vinagre Asesino shakigaaga IT. Salaan.
gabar chula dijo
hello quruxsan ... waad ku mahadsan tahay talooyinkaaga. waqti hore saaxiibkay wuu xirmay wuxuu bartay, dhawaanahan fikrad ah inuusan arki doonin wuxuu sameynayo habeenki ... mahadsanidiin horeyba waan ogahay ... dhunkasho iyo mahadnaq.
Ku jawaab nenita chula
Oops Waxaan u maleynayey inaad ku rakibtay wax si aad u aragto dukumiintiyada dhowaa Wanaagsan sidan, mahadsanid
Hola gabar chula waxaad aragtaa inay jiraan dad aan jeclayn inay muujiyaan waxa ku jira dukumiintiyada dhowaa. Maxay tahay Hagaag hada waad ogtahay sidaad u aragto mana garanayo inaad aragto 😉
Hola Pedro ma jiraan wax la rakibayo si loo arko dukumiintiyada aad dhawaan furtay. Miyaad aragtay sida sahlan? Dhamaan waad salaaman tihiin.
Waxaan hayaa XP Colossus, runtuna waxay tahay inay sifiican u shaqeyso marka laga reebo dhowr waxyaalood sida in aanan soo bandhigi karin feylashii ugu dambeeyay, xitaa ma ahan ikhtiyaar aan ku awood siinayo badhanka aan ku bilaabo sida kor lagu sharaxay. Way iska cadahay in laga bedelay feylka diiwaanka Su'aashayda, ma taqaanaa sida loo suurto geliyo doorashadan?
Tan iyo markii hore aad u mahadsanid
hello khal: daalacashada waxaan helay boggaaga maxaa yeelay waxaan jeclahay inaan barto xirfadaha kombiyuutarka waxayna umuuqatay mid sifiican loo sharaxay, waxaad kufiicantahay macalin ahaan maxaa yeelay waxaad ku sharaxeysaa talaabo fudud oo aad uquruxsan. Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada.
Waad soo dhawaynaysaa Mauricio, waxaan rajaynayaa inaad kusii booqanaysid baloogga oo aadna ubogtay qoraaladaada. Salaan.
Waad salaaman tahay, tani waa mid xiiso leh oo ku saabsan feylasha dhowaantan laakiin waxaan haystaa DHIBAATO ... pc-kayga oo aan ku guuleysto xp sp2 waxaan helaa kaliya 3-dii fayl ee ugu dambeeyay, halka xafiiska pc ay ku yaalliin 10 feylal oo isdaba joog ah taasna aad ayey u shaqeysaa sidaa darteed saaxiibayaal haa Miyaad ii sheegi kartaa sida aan u sameeyo si faylasha 10 ama in ka badan ee ugu dambeeyay sidoo kale looga arki karo kombuyuutarkeyga mahadsanid inay iisoo dirto. nabad gelyo
Jarmal waa markii iigu horeysay ee aan akhriyo dhibaato adiga oo kale ah. Waa dhif iyo naadir, caadi ahaan way soo muuqdaan ama ma muuqdaan, laakiin dokumentiyada qaar uun ma muuqdaan. Waan arki doonaa haddii aan heli karo wax macluumaad ah. Dhamaan wanaag.
Hello khalkeyga dhibaato ayaan ku qabaa dukumiintiyadii ugu dambeeyay waana markii aan raaco tilmaamahaaga qeybta hoose ee xulashooyinka si loo hormariyo, ikhtiyaarka ah in la dhaqaajiyo ama la joojiyo dukumiintiyada dhowaan ma muuqato waan ku guuleystey xp
Ku jawaab roanfo
roanfo ku dhacda kuwa kale oo badan oo badanaa ka dhasha fayras. Xalku ma fududa sidoo kale kuma kalsooni karo feylka hagaajinaya sidaa darteed iskuma xidhi karo. Waan ka xumahay haddii aan helo wax ogeysiis aamin ah.
hi, waxaan u baahanahay caawimaad si aan uga saaro adeegsadaha maamulka, maxaan sameyn karaa?
Waan ku faraxsanahay inaan la kulmo dad adiga oo kale ah. Waxaan haystaa dhibaatada ah inaan awoodi waayo inaan dhaqaajiyo dukumiintiyadii ugu dambeeyay, horey ayaan usameeyay talaabo talaabo laakiin daaqada iima muuqato aniga iyo sidoo kale adiga ikhtiyaarrada horumarsan, calaamadda hoose uma muuqato oraneysa «Xulashadaan… . iyo waliba sanduuqa yar ee "Show ......" la hawlgaliyo, sanduuqaas oo dhami waxay u muuqdaan kuwo madhan .. i caawi fadlan, maxaan sameeyaa?
LETY dhibaatadaadu waa in fayras uu wax ka beddelay diiwaanka Windows. Waxaad ubaahantahay inaad markale wax kabedasho mana sahlana. Waxaa laga yaabaa inaad sameyso casharro.
Waxaan haystaa dhibaatada ah inaan awoodi waayo inaan dhaqaajiyo dukumiintiyadii ugu dambeeyay, horey ayaan usameeyay talaabo talaabo laakiin daaqada iima muuqato aniga iyo sidoo kale adiga Ikhtiyaarrada Sare, calaamada hoose uma muuqato oo oranaysa "Xul xulashadan…. iyo waliba sanduuqa yar ee "Show ......" la hawlgaliyo, sanduuqaas oo dhami waxay u muuqdaan kuwo madhan .. i caawi fadlan, maxaan sameeyaa?
samee casharrada ugu dhaqsaha badan si aad u aragto haddii aan xalliyo dhibaatadaas
Ma arko ikhtiyaarka lagu xoojinayo dukumiintiyada dhowaan. Waxaan raacay nidaamka sida la tilmaamay laakiin ikhtiyaarka ma muuqdo
Waad salaaman tihiin, casharku waa waxa aan raadinayay laakiin ikhtiyaarka ah in la kiciyo dukumiintiyadii dhowaa ma muuqdo, eeg inaad aqoon dheeraad ah u leedahay kiiska oo aad gacan yar na siiso.
Jawaab Fatima Sanches
hello, waxaan raacay tilmaamaha talaabo talaabo. Waxay tilmaamayaan inay arkaan dukumiintiyadii ugu dambeeyay, laakiin ikhtiyaarkaas aad tilmaamayso kama muuqdo kumbuyuutarkayga: "Muuji dukumiintiyada dhawaan la furay". Ma jirtaa waddo kale oo lagu sameeyo ???
Waad salaaman tihiin !! Aad iyo aad u wanaagsan dhammaan khal. Waxaan kuu sheegayaa inaan dhibaato ku qabo liiska faylalka ugu dambeeyay, nidaamka qalliinka waa Windows Vista Business. Waxa dhacaya waa kuwan soo socda: ma cusbooneysiinayo liiska! Mar alla markii aan tirtiro liiska, mar kale ayaa "la buuxiyaa" oo meeshaas kuma qorna dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee furan.
Waxaan rajeynayaa inaan si fiican u sharaxay waadna fahantay waxa aan isku dayayo inaan la xiriiro. Si la mid ah, aad baad u mahadsan tahay. Bisha aad wax badan ka caawisay dhowr jeer.
Jawaab Mike @ itcs
Dugsi hoose laakiin loo baahan yahay. Mahadsanid.
Waad salaaman tihiin, tabaha ay ka tageen waxay iila muuqdaan kuwo aad iigu fiican.
Halkan waxaan ku haystaa dhibaato iyaga ah inay arkaan haddii ay ila shaqeeyaan Waxaan haystaa laptop ah acer 4720z iyo darawalada dhawaaqa aniga ima rakibaan waxaan soo degsaday dhowr wadayaal ah mana jiraan wax aan arko haddii ay iga caawiyaan tan runta aan cunay iyaga uga tagay nasiib yar dhibaatada
Muuqaalka kaliya ee aanan fahmi karin ayaa ah in ikhtiyaarkan uusan ka muuqan menu-kayga, miyaad taqaanaa wado kasta oo aad ku dhajisan karto Windows si ay mar kale u muuqato?
Ku jawaab windosito
Waad salaaman tahay waan arkay waxaad ku sharaxayso "Dukumiintiyadii ugu dambeeyay" kiiskeyga horey ayaan ugu haystay sidii caadiga ahayd, arinku wuxuu yahay kiiskeyga waa la tirtiray ikhtiyaarka guryaha kuma muuqdo, sidee ku heli karaa "Dukumiintiyadii ugu dambeeyay" ka dib ma menu bilowgii baa? aad baad u mahadsantahay waxaaga.
Adiga, Adiga dijo
wax ku biirinta wanaagsan ,,, Ma aqaano inta ay xirneyd laakiin waa wax weyn,
Ku jawaab tuutada
Waad salaaman tihiin, wax waliba waa kuwo aad u qabow oo fudud, laakiin dhibaatada i haysata ayaa ah ikhtiyaarka dukumiintiyada dhowaa ma muuqdaan, booskaasi waa bannaan yahay, waana bilaash. Maxaan sameyn karaa?
Waxaan kujiraa isla xaaladdii Felix iyo tutus. Doorashadan ayaa u muuqata mid maran. Waxaan rajeyneynaa oo waad na caawin kartaa.
Ku jawaab TRINY
Waana sameyn karay. hadaad xiisaynayso ii sheeg Kooxdaydu waa Xp.
WAXAAN HAYAA WINDOWS XP OO AAN LAHAYN FILESKA SOO DHAWEYNTA QAYBTA SHAQADA. SIDEE UGU SHAQAYN KARAA?
Waad ku mahadsantahay caawimaadda inaad awood u yeelato inaad masaxdo macluumaadka kumbuyuutarkeyga
Jawaab jorge luis m
Waa salaaman tahay, dhibaatadaydu waxay tahay ma arki karo galka = Dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee ku yaal C: Documents and Settings Dhamaan isticmaaleyaasha mana qarsoona, maxaan sameyn karaa? Waxay u egtahay in galka la tirtiray laakiin bilowga haddii dukumiintiyadii ugu dambeeyay ay jiraan laakiin aysan kujirin diskiga C, fadlan i caawi, mahadsanid kahor, salaan
Waad salaaman tahay! waad ku mahadsantahay boggaaga Waan raacay tilmaamaha aad siiso ugu dambayntiina waxaan arkaa dukumiintiyadii dhowaa.
Ku jawaab chiquinquira
hello si fiican su'aal uma timaado talaabada 3 ee "Muuji dukumiintiyada dhawaan la furay" Ma helayo inaan hubiyo maxaa yeelay ??? Jawaabtaada waan sugayaa mahadsanid.
laakiin emaylkeyga ayaan khalday
hello Waxaan raadinayaa amar aan ku fuliyo, qoraalada qoraalka ama u adeegsado amar si toos ah loogu furo galka dukumiintiyada dhawaanta, ma sameyn kartaa? mahadsanid.
Ku jawaab gerbasio
ikhtiyaariyada dukumiintiyadii ugu dambeeyay inay muuqdaan waxaan sameeyay wixii aad tilmaamtay laakiin qaybta xulashooyinka horumarsan waxa ku saabsan dukumiintiyada dhawaa ma muuqdaan
Ku jawaab nacayb
Waad salaaman tahay khalka, boggaaga aan ogahay inuu aad wax u barto, nasiib daro maqaalka ma uusan i caawinin maxaa yeelay ikhtiyaarka "DUKUMENTIYO DHAWR AH" kama muuqdo kombuyuutarkayga daaqadda guryaha u gaarka ah. Waad ku mahadsan tahay dhammaan noocyada iyo hambalyada
Jawaab PEDRO M
CARLOS AMA dijo
SALAAN QAADKAYGA MARKII AAN SIIYO FURSADO HORUMAR AH MA MUUJIYO XULASHADA SI AAD II TILMAATO SI AAD II TAHAY DUKUMIINTA Dhowaan
Ku jawaab CARLOS O
Aad baad u mahadsan tahay saaxiib, waxaan u baahday inaan ogaado tan si aan ugu dhaqaajiyo isticmaale i weydiiyay.
jacayl Afinca Melano
Ku jawaab Afinca Melano
RABBI DILKU DILE
I GARGAAR FADLAN!
Waxaan hayaa daabacaad epson lq 1070+ esc / p2 kumana daabaco wax nidaam hawlgal ah. Markaad samaynaysid imtixaanka gacanta waxay si sax ah u daabacaysaa.
Waan ku faraxsanahay wada shaqeyntaada
waad ku mahadsantahay trukitoo jijijijiji weyn
Ku jawaab leydi paola
Maxaa la sameeyaa haddii ay dhacdo "Muuji dukumiintiyada dhowaan la furay" uma muuqato inaad ka tarjumeyso tallaabada # 3? Waxaan isku dayay inaan sameeyo anigoo isticmaalaya gpedit.msc laakiin ma arki karo mid ka mid ah feylasha la isticmaalay ...
Waad ku mahadsantahay soo galinta. Waxaan raadinayay macluumaadkan muddo dheer.
Ku jawaab midominguez
Laga soo bilaabo qodobkan, waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la ogaado halka aan ka heli karno goobta saxda ah ee galka ku jira, maadaama aysan had iyo jeer ku oollin meesha aad noo sheegto, ama si uun aanan u haysan. Had iyo jeer way ii fududahay inaan helo galkaan, laakiin hadda oo aan qaabeeyo mashiinka, mar dambe ma heli karo. Waxaan rajeynayaa inaad ii sheegi kartid wixii aan sameyn lahaa si aan uga dhex muuqdo diiwaanka xididkayga, maadaama faylka isticmaalaha uusan meesha oollin.
Ku jawaab ROBERTO CASTILLO
Waad salaaman tahay, waxay dhacdaa inaan haysto CD sawirro fasaxyadayda ah, waxaanan doonayay nasiib-darrada in la waayo, laakiin sawirradu waxay ku jireen diiwaanka, taas oo ah in HOYGA -> DOCUMENTS laga helo, waxaa jira dhammaan sawirrada, ama badankood, oo waxaan u maleynayaa inaan dib u soo ceshan karo iyaga, markaan dhagsiiyo mid ka mid ah sawiradaas waxay i weydiineysaa inaan disk ku geliyo wadista E (taas oo ah, inaan galiyo cddeyda lumay), laakiin su'aashaydu waxay tahay, miyaan arki karaa sawirrada ee ku jira BILAASH -> DUKUMENTIYADA adigoon dhigin cd-ga aan sida muuqata u seegay ??, mahadsanid
Waoooooooooooooooooooooooooooo !! Ma aqaano sababta aan u dareemayo jahwareer maadaama Daviid uusan halkan joogin! Waxyaabaha ayaa isbadalay ..
Wanaagsan. Udgoonkaaga Qamriga. Laakiin, waxaan u maleynayaa inay tahay wax yar oo xishood ah oo aad u sharaxdo wax aasaasi ah oo 5-sano jir ah uu ku sameyn karo kaliya akhriska iyo raadinta xoogaa.
Qaar baa markaa la yaaban waxa aad halkaan ku sameyneyso "gilipoyas" haddii ay tahay sidaas aasaasi ah hahaha ps haa waa mid aasaasi ah waxaan aadaa webka anigoo raadinaya goleyaal ama websaydho si aan uga tago faalladayda waxa aan u malaynayo.
Qofkii aan jeclayn inuu kufsado ^, ^
Jawaab u dir DaviidBest
Victor Anigu khabiir kuma ahi arrimahaas. laakiin waxaan u maleynayaa in kiiskaaga haa, aad lumisay cd-gaaga iyo pc-kaaga uusan hayn nuqul faylasha ah oo aadan arki doonin sawirada = '(..
haa waad ku mahadsan tahay wax badan khiyaanadan waxay ahayd tii ugu fiicneyd, maxaa yeelay walaalkay ayaa i dili lahaa ...
Hello khal, maanta waxaan arkay goobtaada waxaanan doonayay inaan ku waydiiyo asal ahaanna waxaan kuu sheegayaa ikhtiyaarkaasi iima muuqdo, waa wax badan ka dib markii xulashooyinka ugu horreeya oo kaliya bar cirro leh ay muuqato maadaama nooca XP aaney lahayn doc. dhawaan
Waa inaad wax ka bedesho diiwaanka daaqadaha, tan waxaan u fureynaa regedit (laga bilaabo menu-ka bilowga, orod, regegit)
Aynu aadno furaha soo socda ee diiwaanka daaqadaha:
KU BADAL DIIWAANGELINTA XP COLOSUS
Halkaas waxaan ku bedeleynaa furayaasha furaha sidan:
'NoRecentDocsHistory' --–> tan «1» waxaan ugu beddeleynaa «0»
'NoRecentDocsMenu' ——-> wuxuu ku jiraa «1» waxaan u baddalnay «0»
Waxaan dib u bilaabi doonaa pc-ka, galka dukumiintiyada dhoweydna wuxuu mar kale ka muuqanayaa menu-ka bilowga 😀
aad ufiican casharkaaga ayaa waxbadan iga caawiyay mahadsanid
waad ku mahadsantahay ka caawinta mawduuca dukumiintiyadii ugu dambeeyay ee ku jira liiska bilowga.
Aad ayey ii caawisay.
Iga raali noqo, xiisaha aan u leeyahay ayaa ah in hadii ay jirto qaab lagu kala duwanaan karo dukumiintiyada dhawaanta si ay kaliya u keydiyaan "docs.de word" oo aysan aheyn kuwa kale sida muusikada iyo fiidiyowyada iwm. Waad ku mahadsantahay horay.
Aad baad ugu mahadsantahay sharraxaadda khalka leh shaxanka iyo tilmaamtu way fududdahay ok
Ku jawaab eddy
Waad ku mahadsan tahay wax badan macluumaadka, laakiin waxaan isku dayaa inaan sameeyo talaabooyinkaas oo ikhtiyaarka aan ugu suurtagelinayo dukumiintiyada dhowaan ma muuqdaan. Markii aan sameeyo waxa kor ku xusan, waxaan galaa tabka xulashooyinka Advanced, waxaanan helaa oo keliya ikhtiyaarka ama "Waxyaalaha Bilowga ah ee Dhawaan" oo aan ahayn qaybta hoose. Mahadsanid .. !!!
Maxaa soo kordhay, khiyaanadan ayaa wanaagsan, laakiin um, ma arko ikhtiyaarkaas oo aan dhigayo dukumiintiyadii ugu dambeeyay, sidee baan u yeeli karaa?
Ku jawaab haqker!
HELLO VINEGRE WAXAAN LEEYAHAY ISKU DHIBAATADAAS, LAAKIIN KALA DUWAN YAHAY IN AANAN HELIN XULASHADA SI AAD U SOO BANDHIGTO DUKUMBIYADA UGU DANBAYSA… WAAN SAMEEYAY DHAMMAAN TALAABOOYINKA AAD LEEDAHAY LAAKIIN WAKHTII WAAD QAADANAYSATO FURSADO AAN LAGA HELIN 'AQOON…. IGA CAAWI PORFISSS
Ku jawaab YOESLIN
hello Waxaan qabaa dhibaato la mid ah tan yoeslin, ikhtiyaarkaasi ma muuqdo. haddii aad i siin karto ikhtiyaar kale aad ayaad u mahadsan tahay
Kuwa aan arkin ikhtiyaarka 'dukumiintiyadii dhowaa'
waxay u badan tahay inay doorteen ikhtiyaarka labaad ee Start Menu, oo ah, 'Classic Start Menu'. Haddii ay u beddelaan ikhtiyaarka koowaad sida ku cad daaqadda labaad ee casharka mini, halkaas waa inay raacaan tilmaamaha.
Taas ka dib, waxay dib ugu noqon karaan liiskii ay ku barteen.
Sharaxaad weyn !!! Waan sameeyay 🙂 mahadsanid
Jawaab María Elena Zidar
Waad salaaman tahay; Runtii Mahadsanid !! Way i caawisay maanta, ma aanan ogeyn sida loo helo dukumiintiyadeyda ugu dambeeyay.
Hab kale oo lagu arko dukumiintiyada ugu dambeeya waa adigoo raacaya Jidka soo socda
C: Documents iyo Settings iyo username-kaaga dhawaan, hadii galkaan uusan muuqan waxaad aadeysaa Folder Control Panel Verify tab waxaad tusi kartaa dhamaan feylasha iyo faylalka qarsoon - >>> waad aqbashaa waana intaas
Ku jawaab Paola Munoz